महिला भलिबल प्रतियोगितामा रामधुनी वडा नं ९ पुरस्कृत -
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २४, २०७७ समय: ९:४८:०४
मंसिर २४, झुम्का ।
सुनसरीको रामधुनीमा आयोजित जेसिस साप्ताहिक समुद्घाटन सप्ताहमा महिला भलिबल प्रतियोगिताका बिजेता तथा उपबिजेतालाइ पुरस्कार वितरण गरिएको छ। मंसिर २३ गते मंगलबार सम्पन्न खेलमा युवाको चाहाना समृद्ध रास्ट्र को स्थापना भन्ने उदेश्यका साथ झुम्का जेसिसको आयोजनामा भएको महिला भलिबल प्रतियोगिताका खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरिएको हो। जेसिस सामुदायिक भवनको प्राङ्गणमा भएको खेलमा रामधुनी वडा नं ९ प्रथम हुदै नगद रु. ११,१००/- सहित सिल्ड, प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। उपबिजेतामा चित बुझाएका वडा नं १ ले नगद रु. ७,१००/- सिल्ड तथा प्रमाण पत्रमा चित बुझाएको छ ।
मंसिर १७ गते देखि प्रारम्भ भएको बिभिन्न खेलकुद अन्तर्गत हिजो मंगलबार महिला भलिवल खेलकुदको सेमी-फाइनल र फाइनल खेल भएको थियो । उक्त खेलकुद प्रतियोगितामा रामधुनी नगर भरिका ५ वटा टिमको सहभागीता रहेको थियो । प्रतियोगिताको उदेश्य महिलाहरुलाइ खेलको माध्यमबाट प्रतिष्ठित बनाउने र लुकेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउने रहेको झुम्का जेसिसका अध्यक्ष कुबेर आचार्यले बताएका छन्। यस्ता खालका कार्यक्रमहरुलाइ निरन्तरता दिदै रामधुनी नगरमा रहेका युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने रहेको समेत आचार्यले बताएका छन् ।
जेसिस साप्ताहिक समुद्घाटन सप्ताहका प्रमुख अथितिमा रामधुनी नगर प्रमुख जय प्रकाश चौधरी, विशिस्ट अतिथिमा रामधुनी नगर उप-प्रमुख सबिना कुमारी चौधरी लगायत अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।